FHC: Wordpress Simple Scripts Install — MYSTERY ZILLION
FHC: Wordpress Simple Scripts Install
အစ်ကိုတို့ရေ .. Freehostingcloud မှာ ဟိုအရင်တစ်ခါဒေါင်းပြီးကတည်းက Order မှာရတာအဆင်မပြေတော့ပါဘူး .. နောက်ပြီး Order မှာလို့ရရင်လည်း Wordpress Install လုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျ... ဘီလိုဖစ်တာလဲမတိဘူးကော? သူကျတဲ့ ErroR တွေကို အနော် Snipping tool နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ တင်ပေးထားပါတယ်.. ကြည့်ပီးတော့ ဖြေပေးကြပါဂျို့ .. အဟတ်
404 error ပြနေတာပဲဗျ။ domain name မရှိဘူးလို့ပြနေတာ။
အနော်လုပ်တုန်းကတော့ CPanel ထဲမှာ အဲ့ Account ကြီးပေါ်နေတယ်ကော? မတိတေးတာလားမတိ၀ူး?
ဒါပေမယ့် FHC မှာ Wordpress Install လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အဆင့်ပြီးမှ Installation Directory ထည့်ရတာပါ. ခုက ထည့်ခန်းကိုမရောက်တေးတာ ကိုစေတန်ရ ...
Freehostingcloud က ဟိုတစ်ခါဒေါင်းပြီးကတည်းက အဲ့လိုဖစ်သွားတာပဲ .. ???